Zama iiKhadi kwi-Youtube ukonyusa ukuBambisana nabaBukeli | Martech Zone
Zama iiKhadi kwi-Youtube ukonyusa ukuBambisana nabaBukeli
NgoMvulo, Juni 8, 2015 NgoMvulo, Juni 8, 2015 Douglas Karr
Ngeembono ezininzi kunye nokukhangela njengoko kunjalo kwiYouTube, kubonakala ngathi kukho ithuba elilahlekileyo ngokungabinazo iindlela zokuguqula ezingcono ezifakwe kwiividiyo zeYouTube. I-YouTube isungule amakhadi okuzisa unxibelelwano olongezelelekileyo apho umvelisi wevidiyo ngoku anokuthi afake isimemo esihle sokwenza isilayidi kwividiyo zabo. Inqaku elinye-Amakhadi awasebenzi ukongeza kwi-CTA yangoku ekhoyo kwiYouTube.
Nalu ushwankathelo lwamakhadi e-YouTube
Qiniseka ngokucinezela iqhosha u "i" kwikona ephezulu ngasekunene ukubona ukuba amakhadi asebenza njani.
Kuba iiKhadi zisebenza nokuba umntu usebenza kwidesktop okanye isixhobo esiphathwayo, ukuba ubalatha kwiividiyo zakho, isenokungahambelani ngendlela efanelekileyo. Nangona kunjalo, iqhosha lolwazi lihlala liboniswe kwikona ephezulu ngasekunene. Oku kuhle-ukuqinisekisa ukungaguquguquki nokuba umntu ujonga kwi-YouTube okanye kwividiyo ebethelelwe ngaphandle kwindawo ethile.
Ukunyaniseka, andiqinisekanga ukuba bangaphi abantu abaza kuphuma kwindlela yabo yokucofa iqhosha, nangona kunjalo. Ndivakalelwa kukuba abantu abaninzi baya kuyiphosa ngokupheleleyo. Ndicinga ukuba ukulungelelanisa okungcono kunokuba kukufumana ixesha apho iKhadi lakho lanyanzeliswa ukuba libonwe ukuze abantu balibone xa ixesha lilungile. Kodwa ke- yinto enomtsalane kunye nenyathelo kwicala elifanelekileyo. I-YouTube icwangcisa ukuqhubela phambili nokwenza inkqubo isebenze njengoko ibona ukuba isetyenziswa njani.
Unokukhetha kwiindidi ezintandathu zamakhadi: Ukuthengiswa kwezinto, ukuxhaswa kweNgxowa-mali, iVidiyo, uluhlu lokudlala, iWebhusayithi edibeneyo kunye neNkxaso-mali yabalandeli. Ukuba iakhawunti yakho ime kakuhle kwaye ungumnini womxholo wevidiyo owabelana ngayo, uya kufumana entsha amakhadi tab kuMhleli weVidiyo ukuyila kwaye uyihlele ngalo naliphi na ixesha.
IWilliam-Sonoma kunye neVISA Checkout zisebenzisa iiKhadi le-Youtube
Visa Checkout kwaye Williams-Sonoma baqalise iphulo lokuthengisa kunye necandelo levidiyo ezine ezibizwa ngokuba Ixesha lokuthanda ihlobo ukuxhasa ukufumaneka kweVisa Checkout, inkonzo yeVisa ekhawulezayo nekhuselekileyo yokukhangela kwi-intanethi, ku-Williams-Sonoma.com.
Uthotho lwevidiyo zi ivenkile ngamakhadi e-Youtube-avumela ababukeli ukuba bathenge iimveliso ezibonisiweyo ngokukhawuleza nangokulula ngokunqakraza ngqo kwividiyo- ukwenza iVisa Checkout, enoWilliam-Sonoma, enye yeempawu zokuqala zokusebenzisa itekhnoloji. Iividiyo zenziwe ngokubambisana ne Tastemade, uthungelwano lokutya lokutya jikelele kumaqonga edijithali, kunye nefuthe elikhethwe ngesandla liya kubonelela ababukeli ngeengcebiso kunye namacebo okusingatha amaqela ehlobo afanelekileyo.
Ngokuphuma kwiVisa Checkout, abathengi abakwi-Intanethi bakaWilliams-Sonoma banokuthenga yonke into abayidingayo ukusingatha ipati-yonke ngonqakrazo nje olumbalwa.
tags: Indawo yeWebhusayithiubiza isenzoctaInkxaso mali kubalandeliizimaliyandisa ukuzibandakanya kwe-youtubeIiVidiyo zeNtengisoMerchandiseuluhlu lokudlalayoutubeAmakhadi e-youtubectaumhleli wevidiyo ye-youtube
Ukuzaliseka kwe-IDS: Indawo yokuGcina eguqukayo kunye neenkonzo zokuzaliseka
Ngaba umdiliya yiDayimane kubuRhwebo boLuntu?